Global Voices teny Malagasy · 5 Janoary 2011
05 Janoary 2011
Tantara tamin'ny 05 Janoary 2011
Amerika Latina05 Janoary 2011
Ity dia pejy fandraisana ny vahinin'ny blaogin'i Paul Martins, mpiandraikitra ny ARTICLE 19 Brazil. Raha mila fanampim-baovao, mifandraisa amin'i Rebecca Vincent ao amin'ny: paula [ arobazy ] article19 [ teboka] org. Ireo vondrona Braziliana miaro ny fahalalahana maneho hevitra, anisan'izany ny ARTICLE 19, dia mikarakara fanentanana hanohanana ireo mpirahalahy mpitoraka...
Shina05 Janoary 2011
Sodàna: Hiteraka fanjakana vaovao ve i Afrika amin'ny 2011?
Afrika Mainty05 Janoary 2011
Hiteraka fanjakana vaovao ve i Afrika amin'ny 2011? Hanao fitsapan-kevi-bahoaka i Sodàna Atsimo na hoe hijanona na tsia ho faritr'i Sodàna izy amin'ny 9 Janoary 2011 araka ny ao anatin'ny Fifanarahana Ankapobeny ho amin'ny Fandriam-pahalemana tamin'ny 2005 teo amin'ny governemanta foibe ao Khartoum sy ny Hetsi-panafahan'ny Vahoaka ao Sodàna. Fitsapankevi-bahoaka...
Kazakhstan: Miresaka Finoana ny Mpitoraka Bilaogy
Azia Afovoany sy Kaokazy05 Janoary 2011
Satria i Kazakhstan tsy manana politika mazava amin'ny resaka ara-pinoana, dia lasa toy ny fanao ny hoe afaka manome ny famaritany manokana ny resaka finoana ny olona tsirairay. Tahaka ny tamin'ny roapolo taona lasa, tsy dia nampihontsona ny rehetra loatra ny fisian'izany hamaroam-pijery izany, izay navoitran'ny adihevitra momba ny finoana...